Milicsi: Saadaasha Isku Aadka Jimcaha Ee Champions League Iyo Heerarkii Kooxaha
HomeChampions LeagueMilicsi: Saadaasha Isku Aadka Jimcaha Ee Champions League Iyo Heerarkii Kooxaha
19/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Siddeedda kooxood ee Bayern Munich, Barcelona, Monaco, PSG, Real Madrid, Juventus, FC Porto iyo Atletico Madrid ayaa xalay xaqiijiyey in ay noqon doonaan kuwa ku loollami doona wareegga Afar-dhamaadka (Quarter Final) ee champions League.
Siddeedan kooxood ayaa Jimcaha loogu qori tuuraa magaalada Nyon ee waddanka Switzerland, halkaas oo la isugu keeno doono masuuliyiin metelaya kooxahan iyo madaxda xidhiidhka kubadda cagta ee Yurub hool weyn oo ku yaala marka ay saacaddu tahay 1:30 duhurnimo ee wakhtiga bariga Afrika.
Isku-aadka la samayn doono ayaa noqonaya mid furan oo ay suurtogal tahay in ay isku dhacaan kooxo waaweyn, khaasatan waxa hoosta laga calaamadinayaa FC Barcelona iyo Real Madrid oo ay suurtogal tahay in ay foodda isla galaan.
CIyaaraha wareegga quarter finalka ama rubuc dhamaadka ayaa waxa ay dhici doonaan 14-ka iyo 15-ka bisha soo socota ee April, waxaana mar kale la isugu tegi doonaa magaalada Nyon oo qori-tuur kale loogu samayn doono afarta kooxood ee soo baxa, iyadoo ciyaarta faynalkana la ciyaari doono maalin Sabti ah 6 June, 2015, taas oo ka dhici doonta garoonka Olympiastadion ee magaalada Berlin ee dalka Germany.
Atletico Madrid (ESP): Markii u dambaysay ee ay ka gudubto wareegga Quarter finalka waxa ay isku dhaceen Barcelona, waxaanay ku badisay 2-1 xili-ciyaareedkii u dambeeyey ee 2013/2014, markaas oo ay u gudubtay faynalka oo ay Real Madrid ka qaadday Champions League.
Xili ciyaareedkan waxay ciyaartay 8 ciyaarood, 5 way badisay, 1 way barbaraysay, 2 kalena waa laga badiyey. Waxay Atletico dhalisay 15 gool halka laga dhaliyey 4 kaliya. Ciyaartoyga ugu goolasha badan kooxdan ee Champions League waa Mario Mandzukic oo dhaliyey 5 gool.
FC Barcelona (ESP): Markii Ugu dambaysay ee ay tagto wareegga Quarter Final waxay ahayd sannadkii hore, markaas oo ay la kulantay guul darro ka soo gaadhay ciyaar ay la yeelatay Atletico Madrid oo celcelis ahaan kaga badisay 1-2.
Xili ciyaareedkan, waxay ciyaartay 8 ciyaarood, waxay Barca badisay 7, waxay khasaartay 1, lagamana badin. Waxay dhalisay 18 gool, halka laga dhaliyey 6 kaliya. Ciyaartoyga ugu gool dhalinta badan kooxdan waa Lionel Messi oo u saxeexay 8 gool.
FC Bayern Munchen (GER): Markii ugu dambaysay ee ay soo gaadho marxaladdan waxay ahayd sannadkii hore, waxayse ka gaadhay guul taariikhi ah, waxay celcelis ahaan 4-2 ku dubatay Manchester United. Xili ciyaareedkan waxay ciyaartay Champions League 8 ciyaarood, 6 badis ah, 1 barbar-dhac ah iyo 1 guul darro ah. Waxay dhalisay 23 gool, halka laga dhaliyey 4 gool. Thomas Muller ayaa ugu gool-dhalin badan kooxdan, waxaanu xareeyey 5 gool.
JUVENTUS (ITA): Waxa ugu dambaysay in ay marxaladdan soo gaadho sannadkii 2012/2013 markaas oo ay isku dhaceen Bayern Munich, waxase ay la kulmeen naadigan reer Italy guul darro, waxa 0-4 ku carraabisay Bayern Munich.
Xili-ciyaareedkan waxay ciyaartay 8 kulan, 5 badis ah, 1 barbar dhac ah iyo 2 guul-darro ah. Waxay dhashatay 12 gool, halka laga dhaliyey 5. Waxa kooxdan ugu goolal badan Carlos Teves oo u dhaliyey 6 gool.
AS Monaco FC (FRA): 2003/2004 ayay ahayd markii ugu dambaysay ee ay marxaladdan soo gaadhay, waxay isku beegmeen xilligaas Real Madrid oo ay celcelis ahaan ku kala baxeen 5-5 hase yeeshee waxa gudubtay Monaco oo ku baxday sharciga goolka martida. Xili-ciyaareedkan waxay ciyaartay 8 kulan, 4 badis ah, 2 barbar dhac ah iyo 2 guul-darro ah. Waxay dhashatay 7 gool, waxana laga dhaliyey 4. Gool-dhalinta ma jiro hal ciyaartoy oo dhaliyey wax ka badan hal gool, hase yeeshee 7 ciyaartoy ayaa min 1 gool dhaliyey.
Paris Saint-Germain (FRA): xili-ciyaareedkii hore ayay halkan oo kale soo gaashay, waxase ay ku hadhay sharciga goolka martida markii ay is haleeleen Chelsea oo ay ku kala baxeen celcelis ahaan labadii ciyaaroodba 3-3. Tartankan socda waxay yeelatay 8 ciyaarood, 4 badis ah, 3 barbaro ah iyo 1 khasaare ah. Waxay dhashatay 13 gool, waxana laga dhaliyey 10. Waxa ugu goolal badan Edinson Cavani oo leh 6 gool.
FC Porto (POR): 2008/2009 ayaa ugu dambaysay inay marxaladdan oo kale soo gaadho, waxase berigaas halkaa ku reebay Manchester United oo ku suul-daartay 2-3. Xili ciyaareedkan waxay yeelatay 8 kulan, 7 guul ah, 1 barbar dhac ah. Waxay dhalisay 20 gool, waxana laga dhaliyey 4.
Real Madrid CF (ESP): waxay halkan soo gaadhay sannadkii 2013/2014 markaas oo ay isku dhaceen Borussia Dortmund taas oo ay ku carraabisay 3-2. Tartankan socda waxay ciyaartay 8 kulan, 7 badis ah iyo 1 khasaare ah. Waxay dhalisay 21 gool, waxaana laga dhaliyey 6. Kooxdan waxa ugu goolal badan Cristiano Ronaldo oo dhaliyey 8 gool.
Ciyaaryahankii Tartanka Baabuurta Ee Guy Ligier Oo Geeriyooday
Boston Celtics vs Philadelphia 76ers – Full Game Highlights
Video: Damaashaadkii Tababaraha Liverpool Ee Barbar dhaca West Brom